Tag: isbeddellada tafaariiqda | Martech Zone
Tag: isbeddellada tafaariiqda
Haddii ay jirtay hal wershadood oo aan aragnay inay si muuqata u beddeshay sannadkan hore waxay ahayd tafaariiq. Ganacsiyada aan lahayn aragti ama ilo ay si dijitaal ahaan ah u korsadaan waxay isku arkeen burbursan sababo la xiriira qufulka iyo aafada. Sida laga soo xigtay warbixinnada xiritaanka dukaamada tafaariiqda ayaa sare u kacay 11,000 sanadka 2020 iyadoo kaliya la furay 3,368 xarumo cusub. Hadal Ganacsi & Siyaasad Taas macnaheedu maahan inay bedeshay baahida loo qabo macaamiisha alaabada ku xiran (CPG), in kastoo. Macaamiisha ayaa internetka ka galay meeshii ay ku lahaayeen
U Wareejinta Dukaameysiga tooska ah ee Tafaariiqleyda
Arbacada, Maarso 11, 2015 Douglas Karr
Waxaa jira isbeddel u dhexeeya tafaariiqda iyo dukaamaysiga internetka, laakiin ma hubo in qofna si dhab ah u fahmay halka aan u socono. Tartanka gardarrada ah iyo bixinta maraakiibta bilaashka ah waxay u fiican yihiin macaamiisha laakiin waxay ganacsi ugu wadaan shirkadaha ecommerce. Isla mar ahaantaana, dukaameeyayaashu wali waxay jecel yihiin bandhigga iyo inay taabtaan oo ay dareemaan alaabada ay raadinayaan inay iibsadaan. Caqabad kale oo haysata shirkadaha ecommerce saafi ah ayaa ah tirada sii kordheysa ee gobollada ee ku dabaqeysa canshuuraha iibka